Udume kubathandi bebhola ngokubuyela ezinkundleni - Ilanga News
Home Izindaba Udume kubathandi bebhola ngokubuyela ezinkundleni
Udume kubathandi bebhola ngokubuyela ezinkundleni
Uhlelo lwePSL lunqindwa wumthetho
UDKT Irvin Khoza ongusihlalo wePSL ememezele ukuthi sezishintshile izinhlelo zokubuyela kwabalandeli ezinkundleni.
ISHAYWE ngembibizane iPremier Soccer League (PSL), odabeni lokubuyiselwa kwabalandeli ezinkundleni njengoba ibihlongoza ukusebenzisa umdlalo weKai-zer Chiefs ne-Orlando Pirates odume ngeleSoweto Derby ukugqugquzela abantu baseNingizimu Afrika ukugomela ngobuningi ukhuvethe, kwazise izinhlelo zayo kuthiwa zinqindwa yiDisaster Management Act.
I-PSL ikhiphe isitatimende izolo ngoLwesithathu izwakalisa ukuthi izinhlelo zayo zokubuyisa abalandeli emidlalweni, zinqindwa yilo mthetho ongakuvumeli ukuba abalandeli bayobuka bu-khoma imidlalo ezinkundleni.
Ithi kunesigatshana esikucacisa ngokusobala ngaphansi kwalo mthetho ukuthi kuyicala elibomvu ukuhambela imidlalo. Ithi kumqoka ukuba abalandeli bakuqonde lokhu, yathembisa ukuthi izinto zizojika uma sekukhona izinguquko kulo mthetho osalawula izwe njengoba kugonqiwe.
ISouth African Football Association (Safa) silobe izolo isalindele impendulo kuNgqongqoshe WezeMpilo, uDkt Joe Phaahla, ngesicelo sayo sokuba okungenani uhanjelwe ngabalandeli abawu-2 000 abagomile umdlalo weBafana Bafana neEthiopia wokuhlungela iNdebe yoMhlaba ozokuba ngoLwesibili ngo-18h00 eFNB Stadium, eGoli.
UMnu Mlu Mtshali oyinhloko yezokuxhumana eMnyangweni wezokuBusa ngokuBambisana nezoMdabu, uthe izingxoxo zisaqhu-beka ukuqhamuka nezixazululo kulolu daba lwabalandeli.
Uthe izinkundla zinemithetho yazo elawula ukuvikeleka kwabo bonke abahambela imidlalo. Lapha ubecacisa ukuthi kungani kuyinkinga ukuthi abathandi bezemidlalo bahambele imidlalo ekubeni amaqembu ezepolitiki ekwazi ukuhlanganisa izinkumbi zabantu ndawonye njengoba ekhankasela ukhetho lohulumeni basekhaya ngomhla ka-1 kuLwezi.
Previous article“IPirates siyenzela phansi singabadlali”
Next article“Izangoma” zishaqe impesheni yezalukazi